रौतहट कारागारमा राख्दा आलममाथि थियो सुरक्षा खतरा ? | Ratopati
रौतहट कारागारमा राख्दा आलममाथि थियो सुरक्षा खतरा ?
personमदन ढुङ्गाना exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर २, २०७६ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । कात्तिक २९ गते शुक्रबार करिब ९ दिन लामो थुनछेक बहसपछि रौतहट जिल्ला अदालतले बमकाण्डका आरोपी मोहम्मद आफताव आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो ।
२०६४ साल चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा परी घाइते भएकाहरुलाई इटाभट्टामा हाली जिउँदै जलाएको आरोप आलममाथि छ । आलमलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइन भन्न सकिएन भन्दै जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।
तर कसुर गरिएको भनिएको जिल्लामा नराखी आलमलाई किन कारागार कार्यालय नख्खुमा पठाइयो भनी यतिबेला विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।
कसरी थियो आलममाथि कारगारभित्रै आक्रमणको खतरा ?
आलम नेपाली काँग्रेसका निर्वाचित संघीय सांसद हुन् । राजनीतिमा राम्रो प्रभाव भएका र आलमकै निकट रहेका साविकको जिंगडवा बेलबिथवा ५ तथा हालको परोहा नगरापालिका २ का वडाध्यक्षका उम्मेदवार थिए शेख सेराजुद्दिन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवार थिए ।
निर्वाचन सकिएपछि त्यसको केही दिनपछि २०७४ असोज ९ गते नेपाली काँग्रेसबाट वडाध्यक्षका प्रत्यासी रहेका सेराजुद्दिनका ३२ वर्षीय छोरा अकबर अलीको गोली हानी हत्या भयो ।
यो हत्यामा वडाध्यक्ष एजाजुर रहमानको संलग्नता रहेको भन्दै आलमकै निर्देशनमा पराजित वडाध्यक्षका उम्मेदवार शेख सेराजुद्दिनले ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए ।
जाहेरीपछि घटनामा संलग्न भनिएका वडाध्यक्ष मोहमद एजाजुर रहमान, शेख सलिम, मोहमद तारिख, शेख मोहमद चौकत अली पक्राउ परे ।
रौतहटमा आन्दोलन गराउने आलमको योजना थियो
क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदी
कारागार कार्यालय रौतहटमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या पनि क्षमताभन्दा धेरै बढी छ । १ सय २० जना कैदीबन्दीको क्षमता रहेको कारागारमा अहिले नै २ सय ७९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । त्यसकारण ‘भीआइपी’ कैदीलाई सामान्य कैदीसरह राख्न पनि कारागार कार्यालयलाई अफ्ठेरो परेको थियो ।
आलमले आफू बिरामी रहेको र मेडिकल रिपोर्ट पनि जिल्ला अदालतमा बुझाएका थिए । बिरामी भएको कारण कारागार बाहिरबाटै मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउँ भनी पेश गरेको निवेदनमाथि आदेश दिँदै जिल्ला अदालतले उनको उपचारको व्यवस्था मिलाउनु भनी आदेश दिएको देखिन्छ ।
आदेशमा आलम मधुमेह र उच्च रक्तचापको बिरामी रहेको भन्दै यी रोगको उपचार हुने अस्पतालमा उपचार गराउनु भनी जिल्ला कारागार रौतहटलाई लेखी पठाउनु भनी आदेश भएको छ ।
आदेशकै बुँदा नम्बर २६ मा आलमलाई ‘सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट प्रतिवादीलाई जिल्ला कारागार रौतहटमा राखिराख्नु अनुपयुक्त देखिएको अवस्थामा साक्षी वकपत्र र मुद्दाको पुर्पक्षका समयमा यस अदालतमा अनिवार्य उपस्थित गराउने गरी कारागार व्यवस्थापन विभागसँग समन्वय गरी अन्य उपयुक्त कारागारमा स्थान्तरण गर्न सक्ने गरी अनुमति समेत प्रदान गरिदिएको छ’ भनिएको छ । त्यसै आधारमा कारागार कार्यालय रौतहटले आलमलाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै कारागार कार्यालय नख्खुमा स्थान्तरण गरिएको हो ।
यसरी रौतहट बमकाण्डका आरोपित मोहम्मद अफताब आलमलाई रौतहट कारागारमै राख्दा सुरक्षा खतरा बढेपछि उनलाई रौतहटबाट काठमाडौंमा सरुवा गरिएको थियो ।
–रौतहटबाट सञ्जय मिश्राको सहयोगमा
एनसेलले गत वर्ष सरकारलाई ति¥यो २७ अर्ब कर, टेलिकमले जम्मा १२ अर्ब